Dybala mise Lacazette – Taageerayaasha kooxda Atletico Madrid oo doortay badalka Griezmann – Gool FM
(Spain) 19 Maajo 2019. Sida laga soo xigtay wargeyska “AS” ee dalka Spain taageerayaasha Isbaanishka ah ee kooxda Atletico Madrid ayaa waxay u doorteen Paulo Dybala inuu noqdo badalka Antoine Griezmann xilli ciyaareedka soo socda.
Antoine Griezmann oo haatan 28 jir ah ayaa dhawaan si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka tagayo Atletico Madrid xagaagan, si la mid ah maamulka kooxda ayaa war rasmi ah ay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen bixitaanka Griezmann.
Kaddib markii uu xaqiijiyay Antoine Griezmann inuu ka tagayo Atletico Madrid, maamulka kooxda iyo macalinka reer Argantina ee Diego Simeone ayaa waxay ka fikirayaan bedelka xiddiga reer France.
Hadaba wargeyska AS ayaa boggiisa rasmiga ah wuxuu ugu soo bandhigay su’aalo uu la wadaagay taageerayaasha kooxda Atletico Madrid ee ah musharaxa ugu awoodda badan ee buuxin kara booska Antoine Griezmann.
Natiijada codbixintii la sameeyay ayaa noqotay, in Paulo Dybala uu helo 5,500 cod, wuxuuna kaga sara maray xidiga kooxda reer London ee Arsenal Alexandre Lacazette oo helay 2000 cod.